Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Tallaalka Ruushka ee Sputnik V hadda loo oggolaaday gelitaanka Israel
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Maamulka Israel ayaa oggolaaday gelitaanka shaqsiyaadka lagu tallaalay Sputnik V COVID-19.
Shakhsiyaadka la tallaalay Sputnik V waxay booqan karaan wadar ahaan 31 waddan iyaga oo aan wax oggolaansho ah oo dheeri ah oo la xiriira COVID-19.
PCR-da taban ama baaritaannada kahortaga jirka ee togan marka la soo galo ayaa tan ku fidiyay 50 wadan oo dheeraad ah.
Karantiil khasab ah ayaa looga baahan yahay 20 waddan oo dheeraad ah.
Sanduuqa Maalgelinta Tooska ah ee Ruushka (RDIF, sanduuqa hantida madaxbanaanida ee Ruushka) ayaa ku dhawaaqay in masuuliyiinta Israel ay ogolaadeen gelitaanka shaqsiyaadka lagu tallaalay Sputnik V Talaalka covid19.
Shuruudaha muhiimka ah ee wadamada ogol booqashooyinka soo socda Sputnik V tallaal*:
PCR-da taban ama baaritaannada kahortaga jirka ee togan marka la soo galo ayaa tan ku fidiyay 50 wadan oo dheeri ah;
Kaliya 15 waddan ayaa u baahan tallaallo aan ahayn Sputnik V. Kaliya 5 ka mid ah wadamadan, oo uu ku jiro Mareykanka, ayaa si buuxda ugu tiirsan oo kaliya Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO)Liiska tallaalada la ansixiyay.
* Fiisaha iyo (ama) ogolaanshaha gelitaanka kale ee loo baahan yahay, qofku waa inuu sidoo kale buuxiyaa shuruudaha kale ee aan la xidhiidhin xannibaadaha coronavirus. Falanqaynta fursadaha gelitaanka waxay ku salaysan tahay shuruudaha dadweynaha dalalka ugu badan, waxaana laga yaabaa inaanay ka tarjumaynin xaddidaadyo ama ku-takri-falka xoog-siyeedka dalal la doortay ama qaybo gaar ah. 27 wadan ayaa wali xuduudo u xidhan booqdayaasha wadamada kale intooda badan.